အိမ် - house in yankin for sale Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အိမ် classified: House in Yankin for Sale
လမ်းသန့်နေရာကောင်း လုံးချင်း ရောင်းမည် ရန်ကင်းမြို့နယ်ထဲက နေချင်စဖွယ် လုံးချင်းတစ်ထပ်အိမ်လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ.... ဘောက်ထော်၊ ပြည်သာယာလမ်းသွယ် မိုးကောင်းလမ်းအနီး၊ လမ်းသန့် မြေအကျယ် (70' x 90' + 1RC) ဂရံအမည်ပေါက်၊ အသင့်နေ2Master Bedrooms +2Bedrooms ကားဂိုထောင်သီးသန်၊ ရေ/မီး နှစ်မျိုးပါ ကျွန်းသစ်များဖြင့် အလှဆင်ထား ----------------------------------- ရောင်းစျေး - ၁၈,၀၀၀ သိန်း (ညှိနှိုင်း) ----------------------------------- IF would like rent or buy any Condominium,House,Land,Office space,Hotel,Warehouse and about real-estate in Yangon, please your used amount and needs. We have several Sales/rental information. Do Not hesitate to call Thanks. Contact: Ph-09452104340 available (Viber, wechat, whatapp) [email protected] Dataတွင်မပါဝင်သော လုံးချင်း ကွန်ဒို မြေကွက် တိုက်ခန်းများကိုလဲ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်